America NeEngland Zvoenderera Mberi Kumakwikwi E2010 World Cup Soccer
Mumakwikwi e2010 FIFA World Cup Coccer ari kutambirwa muSouth Africa mumutambo we group “C” chikwata che America chakunda chikwata che Algeria 1-0 pamutambo watambwa nhasi izvo zvaita kuti chikwata ichi chivepamusoro mu group C nemapoints mashanu.
Mutambi Landon Donovan anwisa chibodzwa chabatsira america kuti ikunde muextra time.
Munemumwe mutambo weGroup C chikwata che England chakunda chikwata che Slovenia 1-0 chikakwanisa wokuenderera mberi sezvo chaitawo mapoints mashanu asi chiripadzvimbo yechipiri sezvo America chakakwanisa kunwisa zvibodzwa zvina pamitambo yacho iyo England ichaniswa zviviri.
Vamwe vatsigiri vanoti varikufadzwa nekukunda kwaita America ne England asi vamwe vanoti kubuda kweAlgeria kuri kuvashungurudza sezvo kwavekureva kuti kuchange kune zvikwata zvishoma zvemuAfrica mumakwikwi aya.
Mustigiri wenhabvu Tapiwa Barwe ari muEngland anoti anofadzwa nekubudirira kweEngland asi haasi kufadzwa nematambiro angeachiita chikwata ichi mumakwikwi aya. Mumwe mutambi wechikwata chemaWarriors David Kutyakuripo anoti haasifufadzwa nekubuda kwaita Algeria sezvo pave nezvikwata zvishoma zvemuAfrica zvichikwanisa kuenderera mberi nemakwikwi aya.